क्षेत्री,बाहुनको कोखबाट जन्मनु अपराध हो ? जातिय आरक्षण तत्काल खारेज गरौ- सांसद,झपड रावल « हाम्रो ईकोनोमी
प्रस्तावित व्यवस्थामा म जुन समुदायबाट आएको छु, मेरो उपस्थिति कहाँ रहन्छ ? कि तपाईंहरूले प्रस्ट ढंगले के व्याख्या गर्नुपर्‍यो। यहाँ उल्लेख नभएकाहरूका लागि ५५ प्रतिशत सुनिश्चित हो। वाध्यात्मक वाक्यांश लेख्नुस्। मेरो घरमा, मेरो समुदायमा जन्मिनासाथ त्यो सम्पन्न भएर आउँछ ? त्यसैले जातीय आरक्षण सरासर मौलिक हक र संविधानका निर्देशक सिद्धान्तविरुद्ध छ।
अहिले भइरहेको र खाइपाइ आएका जातीय आधारमा सिट विभाजन गरौँ र बाँडिचुँडी खाऊँ। त्यो भन्न खोज्नुभएको हो भने त्यै गरौँ। होइन भने कुनै मान्छे कुनै जातमा जन्मिनु उसको अभिशाप हो ? कि उसको बाध्यता हो ? अभिशापको रूपमा लिनुभएको हो भने जे प्रस्ताव आएको छ त्यसले स्विकार्छ। होइन उसको बाध्यता र अनिवार्यता हो भने त्यसलाई अर्को ढंगले व्याख्या गर्नुपर्छ होला नि, त्यसैले यसमा पहिला प्रस्ट हौँ भन्ने लाग्छ।